श्रीमानकै सहयोगमा लगातार सात पटकसम्म अपरिचित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न उनले कसरी सक्छिन् ? – ताजा समाचार
श्रीमानकै सहयोगमा लगातार सात पटकसम्म अपरिचित पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न उनले कसरी सक्छिन् ?
काठमाडौँ । इन्डोनेसियामा एउटा अनौठो परम्पराले जरा गाडेको छ । त्यहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग शा रिरिक सम्बन्ध कायम राख्छन् ।
अझ रोचक कुरा त के छ भने विवाहित महिलाले कुनै अपरिचित पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा उनीहरूका श्रीमानले समेत सहयोग गर्छन् । यो चलन १६ औं शताब्दीदेखि चलिआएको छ ।
हामीकहाँ परपुरुषसँगको सम्बन्ध अवैध र घृणित मानिन्छ तर इन्डोनेसियाको पोन नामक पर्वमा महिला तथा पुरुषहरू माउन्ट केमुकस पुग्छन् ।
त्यहाँ महिलाहरूले आफूलाई मन पर्ने कुनै अपरिचित पुरुषको खोजी गर्छन् अनि मनले खाएको पुरुष फेला परे सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् । हरेक ३५ दिनमा जब यो पर्व आयोजित हुन्छ, महिलाहरूले सोही पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध गर्नुपर्छ ।
लगातार सात पटकसम्म महिलाले उक्त पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध गरेपछि महिलाको मनको इच्छा पूरा हुने जनविश्वास छ । यो पर्वसँग एउटा अनौठो कथा जोडिएको छ ।
१६ औं शताब्दीमा त्यहाँका राजा थिए– पेगेरन समोरो । उनी आफ्नी सौतेनी आमा नायी ओत्रोवुलानलाई खुब मन पराउँथे । एकरात जब उनी सौतेनी आमासँग शारीरिक सम्बन्ध गरिरहेका थिए, त्यही समयमा दुवैको हत्या भयो । त्यसैले राजा र उनकी सौतेनी आमाले पूरा गर्न नपाएको शारीरिक सम्बन्ध जसले पूरा गर्छ उसका सबै दुःख हट्ने र घरमा खुसियाली छाउने विश्वास गरिन्छ ।